Kooxda Manchester City oo ka jawaabtay xiisaha ay Manchester United u muujinayso Raheem Sterling – Gool FM
(Manchester) 03 Juun 2020. Waxaa dhowaan soo if baxay in kooxda Manchester United xiiso badan u muujineyso saxiixa laacibka Manchester City ee Raheem Sterling, iyadoo maanka ku heysa ganaaxa kooxda ka dhisan garoonka Etihad laga saaray tartammada Yurub labada xilli ciyaareed ee soo socda.
Man City ayaa maxkamadda ugu sarreysa ciyaaraha u gudbisay racfaan ay ku dooneyso in ganaaxa loogaga qafiifiyo, balse waxaa hubanti ah in saameynta ganaaxan ay sababi karto inay kooxda lumiso xiddigo muhiim u ah safkooda.
Si kastaba ha ahaatee, ilo ku dhow maamulka Man City ayaa Majaladda Metro u sheegay inay kooxdu kalsooni fara badan ku qabto inay sii heysan karto Sterling, sidoo kalena aysan dareen u ahayn inay iibiyaan laacibka garabka ka ciyaara ee reer England, iskaba daa inay ka iibiyaan koox ay xafiiltamaane.
Sky Blues ayaa gaashaanka u daruurtay xiisihii kooxda Old Trafford ka dhisan ay u muujineysay weeraryahankii hore ee Liverpool, waxaana laacibka garabka ka ciyaara ay u arkaan hanti muhiim ah kooxdooda.
Heshiiska uu Sterling kula jiro Manchester City ayaa dhici doona xagaaga 2023-ka, xilli Jariiradda Metro ay bishii December qortay in kooxda uu hoggaamiyo Macallin Pep Guardiola ay wada hadallo kula jirto laacibka qaranka England si heshiis hor leh ay kaga saxiixaan.
25-sano jirkaan ayaa ka mid ah xiddigaha ugu mushaharka badan kooxda lagu naynaaso Citizens, sidaas oo ay tahay, waxay kooxdiisa dooneysa inay ka dhigto xiddigii ugu mushaharka badnaa ee Man City taariikhdeeda soo mara, iyagoo u qorsheeyay mushahar dhan 380,000 oo gini toddobaadkii.
Yeelkeede, ma cadda saameynta xanuunka faafa ee coronavirus ku yeellan doono qorshaha Manchester City ee qanadaraas u kordhinta Raheem Sterling, kaasoo xiiso ugub ah ka helaya kooxda lagu naynaaso Red Devils.